တင်မောင်ထွေး – ဘာသာပြောင်းသူတွေကို သေဒဏ်ပေးဖို့ အစ္စလာမ်က သတ်မှတ်ပြဌာန်းထားပါသလား | MoeMaKa Burmese News & Media
လူတစ်ယောက်က သူကိုးကွယ်တဲ့ ဘာသာကနေ အခြားဘာသာတစ်ခုကို ပြောင်းသွားတယ်ဆိုရင် သာသနာပ ဖြစ်သွား တယ်။ တနည်း ဇာတ်ပျက်သွားတယ်ဆိုပြီး သူ့ကိုရည်ညွှန်းပြောကြဆိုကြတယ်။ ဒါဟာ မေးငေါ့ပျက်ရယ်ပြုတဲ့ အသွင်နဲ့ ပြောတဲ့စကားလို့ ဆိုရပါမယ်။
ကိုးကွယ်နေတဲ့ ဘာသာတစ်ခုကနေ အခြားဘာသာကို ပြောင်းသွားတာ၊ ဒါမှမဟုတ် ဘာသာမဲ့ဖြစ်သွားတာဟာ လူတစ် ယောက်ရဲ့ကိုယ်ပိုင် ရွေးချယ်ခွင့်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဘာသာပြောင်းခြင်းဟာ ရာဇ၀တ်မှုမဟုတ်ပါ။ စီကူလာခေါ် လောကီသီး သန့်ရှုထောင့်အရတော့ ဘာသာပြောင်းသွားသူကို အခြားလူအုပ်စုက အပြစ်ကျူးလွန်သူပါလားဆိုတဲ့ အမြင်နဲ့တောင် မ ကြည့်ရှုသင့်ပါ။
မွတ်စလင်တွေရဲ့ ကျမ်းစာဖြစ်တဲ့ ကိုရန်ကျမ်းစာမှာတော့ အစ္စလာမ်သာသနာကနေ ဘာသာပြောင်းသွားတဲ့သူ၊ ဒါမှမဟုတ် ဘာသာမဲ့ဖြစ်သွားသူကို အာရေဗျဘာသာစကားနဲ့ “အီးရ်သတ်ဒ်” (လှည့်ထွက်သွားသူ) လို့ ဖော်ပြတယ်။ အဲဒီလို ဖော်ပြ ချက်ကလွဲလို့ မွတ်စလင်အဖြစ်ကနေ စွန့်လွှတ်သွားတဲ့ လူအတွက် တခြားတစ်စုံတစ်ရာ စကားလုံး သုံးစွဲထားတာမျိုး မရှိပါဘူး။ ဒါ့ပြင် အစ္စလာမ်မှာ ဘာသာပြောင်းသွားသူအတွက် အစိုးရကသော်လည်းကောင်း၊ ဘာသာရေးဆရာတွေက သော်လည်းကောင်း အပြစ်ဒဏ်ချမှတ်စီရင် ဖို့လည်း သတ်မှတ်ပြဌာန်းထားခြင်း မရှိပါဘူး။
ရက်အနည်းငယ်အလျင်က ဆော်ဒီမှာ ပါလစ္စတိုင်းကဗျာဆရာကို ဘာသာပြောင်းတဲ့အတွက် သေဒဏ်ချမှတ်ခဲ့တယ်။ ဆော် ဒီ၊ အီရန်စတဲ့ နိုင်ငံတွေမှာတော့ အစ္စလာမ်ဘာသာကနေ တခြားဘာသာပြောင်းရင် သေဒဏ်ပေးဖို့ ဥပဒေ ပြဌာန်းထား ပါတယ်။ ဆော်ဒီနဲ့ အီရန် စတဲ့နုိုင်ငံတွေကတော့ သူတို့ကိုယ်ပိုင် တီထွင်ပြဌာန်းထားတဲ့ အဲဒီဥပဒေကို ရှရီယာဥပဒေလို့ ကင်ပွန်းတပ်ထားပါသေးတယ်။
အစ္စလာမ်သာသနာမှာ ဘာသာပြောင်းသွားတဲ့သူကို အပြစ်ဒဏ်တစ်စုံတစ်ရာ ပေးထိုက်တယ်၊ မပေးထိုက်ဘူးဆိုတာ ဆုံး ဖြတ်ဖို့ အစ္စလာမ့်ဥပဒေဖြစ်တဲ့ ရှရီယာကို ကိုးကားကြပါတယ်။ ရှရီယာဆိုတာ ဥပဒေအပိုဒ်ခွဲ ပုဒ်မတွေတန်းစီရေးထားတဲ့ ဥပဒေကျမ်းကြီးမဟုတ်ပါ။ ကမ္ဘာပေါ်က ဘယ်မွတ်စလင်တစ်ဦးတစ်ယောက်မှ ရှရီယာဥပဒေစာအုပ် ဖတ်ဖူးဖို့မဆိုထားဘိ၊ မြင်တောင် မြင်ဖူးကြမှာ မဟုတ်ပါ။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ ရှရီယာဥပဒေစာအုပ်ဆိုတာ မရှိလို့ပါပဲ။
ဒီလိုဆို ရှရီယာဥပဒေပုဒ်မတွေ ဘယ်ကလာသတုန်း။ ရှရီယာလို့ ဆိုလိုက်တာနဲ့ မွတ်စလင် (ဥပဒေ) ပညာရှင်တွေ မျက်စိထဲ တန်းမြင်ကြတဲ့ စာအုပ်ကတော့ ကိုရန်ကျမ်းစာပဲ ဖြစ်တယ်။ “ကိုရန်အပြင် တခြားကျမ်းရဲ့ အဆို” ဆိုတဲ့ စကားလုံးမျိုးကို ကိုးကားပြီး ကိုရန်ကျမ်းကို ဆန့်ကျင်နေသည့်တိုင် အဲဒီအဆိုကို ရှရီယာ ခေါင်းစဉ်အောက်ပို့ဖို့ မဖြစ်နိုင်ပါ။ ရှရီယာဥပဒေကို ကိုရန်ကျမ်းကသာ စိစစ်ပြဌာန်းပေးတယ်ဆိုတဲ့အချက်ကိုတော့ မွတ်စလင်တွေရော မွတ်စလင်မဟုတ်သူတွေပါ ရှင်းရှင်း လင်းလင်း ပြတ်ပြတ်သားသား နားလည်ကြဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။ ရှရီယာ ပုဒ်မတွေကို ဘယ်လို ဘယ်ပုံ စိစစ်ယူသလဲ စမ်း စစ်ရင် ….
၁) ရှရီယာဥပဒေသည် ကိုရန်ကျမ်းစာသာ ဖြစ်တယ်။
၂) ကိုရန်ကျမ်းစာကို ကျမ်းစာနဲ့ အတူ လက်တွေ့ကျင့်ကြံပြသခဲ့တဲ့ တမန်တော် မုဟမ္မဒ်ရဲ့ စံနမူနာ ကျင့်ထုံး (အာရေဗျ ဘာ သာစကားနဲ့ ‘စွန်နာဟ်’ ) တွေကိုစံထား နမူနာယူပြီး ကိုရန်ကျမ်းက ဆင့်ဆိုတဲ့ ဥပဒေတွေကို လက်တွေ့ကျင့်သုံးနိုင်ကြတယ်။
၃) ကိုရန်ကျမ်းစာမှာ ပါရှိတဲ့ ကျမ်းချက်တွေကို အသေးစိတ်နားလည်ဖို့ ဋီကာဖွင့်တဲ့အခါ ဋီကာပညာရှင်တွေက တမန်တော် မုဟမ္မဒ်ရဲ့ နုတ်ထွက်စကားတွေကို ကိုးကားပြီးဋီကာဖွင့်ကြတယ်။ အဲဒီနုတ်ထွက်စကားတွေကို စုစည်းထားတဲ့ ကျမ်းတွေရှိ တယ်။ အဲဒီကျမ်းတွေကိုတော့ “ဟဒီးဆ်” ဆိုပြီး ခေါ်တယ်။ အဲဒီဟဒီးဆ်ကျမ်းပါ ဖော်ပြချက်တွေသည် ကုိုရန်ကျမ်းကို ထောက်ပံ့ဆွေးနွေးတာမျိုးဖြစ်ပြီး ကုိုရန်ကျမ်းရဲ့ သွန်သင်ချက်များနဲ့ လိုက်လျော်ညီထွေဖြစ်နေမှသာ သူ့ကို ရှရီယာ တရား ရုံးက ထည့်သွင်းစဉ်းစားနုိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒါကြောင့် ရှရီယာဥပဒေမှာ အဆင့်တွေရှိလာတယ်လို့ ဆိုနိုင်တယ်။ နံပါတ် ၁ က ကိုရန်ကျမ်း၊ နံပါတ် ၂ က စွန်နာဟ်နဲ့ နံ ပါတ် ၃ ကတော့ ဟဒီးဆ်။
တဖန် မှတ်သားရမှာက တမန်တော် မုဟမ္မဒ်ရဲ့ လက်တွေ့ကျင့်သုံးမှုတွေဟာ ကိုရန်ကျမ်းစာအတိုင်း တသဝေမတိမ်းဖြစ် ပါတယ်။ ဒါကို မွတ်စလင်တိုင်း သဘောတူပါတယ်။ ဒါကြောင့် ကိုရန်ကျမ်းစာလာ အချက်များနဲ့ စွန်နာဟ်ကျင့်သုံးမှုတွေဟာ လုံးဝဥဿုံ ထပ်တူထပ်မျှ ဖြစ်ပါတယ်။
ဟဒီးဆ်တွေကတော့ တမန်တော်မုဟမ္မဒ်အလွန် နှစ်ပေါင်း ၃ ရာကျော်မှ စတင်စုစည်းထားတာကြောင့် အဲဒီထဲမှာ အမှား အမှန် အဆိုးအကောင်းတွေ ရောပြွမ်းနေပါတယ်။ ဟဒီးဆ်တစ်ခု မှန်/မမှန်ကိုတော့ လွယ်လွယ်ကူကူ ဆုံးဖြတ်နိုင်ပါတယ်။ ကိုရန်ကျမ်းစာနဲ့ တိုက်ကြည့်လိုက်ပါ။ ဆန့်ကျင်နေတယ်ဆိုရင် အဲဒီဟဒီးဆ်ကို စွန့်ပစ်နိုင်ပါပြီ။ သို့သော် ရိုးသားစွာ ၀န်ခံလို တာက ကိုရန်ကျမ်းနဲ့ ဆန့်ကျင်နေသည့်တိုင် အဲဒီဟဒီးဆ်တွေကိုကိုင်စွဲပြီး ရှရီယာခေါင်းစဉ်အောက် ဆွဲသွင်းထားကြတဲ့ အစ္စလာမ်မစ် နိုင်ငံတွေ ရှိနေပါသေးတယ်။
ရှရီယာရဲ့ အဓိပ္ပါယ်က “သီတာရေစဉ်လို ကြည်လင်အေးမြတဲ့ ဘ၀လမ်းညွှန်” ဖြစ်ပါတယ်။ အေးမြတဲ့ ဘ၀လမ်းညွှန်မှာ ဘာသာပြောင်းကိုးကွယ်သူအတွက် အပြစ်ဒဏ် တစ်စုံတစ်ရာ ပြဌာန်းထားတယ်ဆိုတာ ယုံပါသလား? ၀မ်းနည်းစရာ ကောင်းတာကတော့ မွတ်စလင်အချို့ကိုယ်တိုင် ဟုတ်ကဲ့၊ ယုံပါတယ်လို့ အဖြေပေးနေကြတာပါပဲ။
အခုရှရီယာဥပဒေ စစ်စစ်ဖြစ်တဲ့ ကိုရန်ကျမ်းစာရဲ့ ရှုထောင့်အရ အစ္စလာမ်သာသနာမှာ ဘာသာပြောင်းသွားသူအတွက် အပြစ်ဒဏ် တစုံတရာ ပြဌာန်းထားခြင်း ရှိ/မရှိ စိစစ်ကြပါမယ်။
အဖြေရလဒ်ကိုတော့ ကြိုတင် ဖော်ပြထားပါရစေ။ “ဘာသာပြောင်းခြင်းအတွက် ပြဌာန်းထားတဲ့ဥပဒေ” အမျိုးအစားက ခရစ် ယာန်သာသနာရဲ့ ခေတ်လယ်ကာလမှာ တွင်ကျယ်ခဲ့ပြီး အဲဒီဥပဒေကို အစ္စလာမ့်ရှရီယာနဲ့ ယှဉ်ထိုးစိစစ်ရင်တော့ အစ္စလာမ်နဲ့ ဘာသာပြောင်းခြင်းအတွက် အပြစ်ဒဏ်ဆိုတာဟာ ကမ္ဘာဂြိုဟ်ပေါ်က သက်ရှိလူသားနဲ့ ကျွန်တော်တို့ တခါမျှ မမြင်ဖူးတဲ့ တခြားဂြိုဟ်ပေါ်က ဂြိုဟ်သားတစ်ယောက်လို သူစိမ်းတရံဆံတွေ ဖြစ်နေတယ်ဆိုတာ တွေ့ရမှာပါ။
ဘာသာပြောင်းခြင်းအတွက် အစ္စလာမ်က ပြဌာန်းတဲ့ အပြစ်ဒဏ် ရှိမရှိကို စိစစ်အကဲဖြတ်ဖို့ နည်းလမ်းတွေ လိုအပ်ပါတယ်။ ဒီနည်းလမ်းတွေကို အသုံးပြုပြီးတော့ ရှရီယာရဲ့ အဓိကပင်မရေသောက်မြစ်ဖြစ်တဲ့ ကိုရန်ကျမ်းစာပါ ဖော်ပြချက်တွေကို စစ် ထုတ်ယူနိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
အခြေခံကျပြီး စံထားနိုင်တဲ့ နည်းလမ်းကတော့ ကုိုရန်ကျမ်းစာလာ မုက္ခပါတ်တစ်ခုကို ကိုရန်ကျမ်းရဲ့ အခြားမုက္ခပါတ်များ က သာ မှန်ကန်စွာအဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုပါတယ်။ တနည်းဆိုရရင် ကိုရန်ကို ကိုရန်ကသာ တိတိပပ အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုတယ်။ တစ်နေ ရာမှာ အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုချက် မှားယွင်းခဲ့ရင် ကိုရန်ကျမ်းရဲ့ အခြားနေရာပေါင်း များစွာကနေ ထောက်ပြနေလေ့ရှိပါတယ်။
“….ယင်း(ကုရ်အာန်ကျမ်းစာ)၌ခိုင်မာပြတ်သားသော (အာယတ်) မုက္ခပါတ် တော်များရှိ၏၊ ယင်းတို့သည် ကျမ်းတော်၏ မိခင်ဖြစ်၏။ ထို့ပြင် အခြားဆင်တူယိုးမှားဖြစ်သည့် (အာယတ်တော်များ) လည်းရှိ၏။ သို့ဖြစ်ရာ မိမိတို့၏စိတ်နှလုံးများတွင် ကွေ့ကောက်တိမ်း စောင်းမှုရှိသူတို့သည် ပြဿနာကိုလိုလား၍ အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုရန်အတွက် ယင်းမှတစ်ခုနှင့်တစ်ခု ဆင်တူ ယိုးမှားဖြစ်သည့် (အာယတ်တော်များ) ကို လိုက်နာကြ၏။ အမှန်သော်ကား ယင်း၏ အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုချက်ကို အလ္လာဟ်နှင့် ပညာအရာတွင် ရင့်ကျက်မှုရှိသူတို့မှတစ်ပါး အခြားမည်သူမျှ မသိကြချေ။ သူတို့က ကျွန်ုပ်တို့သည် ယင်းကိုယုံကြည်ကြပါ၏၊ အားလုံးသည် ကျွန်ုပ်တို့၏ ဖန်ဆင်းမွေးမြူရှင်ထံတော်မှဖြစ်ပါ၏ဟု ဆိုကြပေသည်။ အမှန်သော်ကား ဥာဏ်ပညာအမြှော် အမြင်ရှိ သူတို့မှတစ်ပါး မည်သူမျှအဆုံးအမကို မရယူကြချေ။” (ကိုရန်ကျမ်းစာ ၊ အခန်းနံပါတ် ၃ ၊ မုက္ခပါတ်အမှတ်စဉ် ၈)
ကိုရန်ကျမ်းရဲ့မုက္ခပါတ်အချို့က ရှင်းလင်းပြတ်သားတာကြောင့် လွဲမှားပြီး အဓိပ္ပါယ်ကောက်ဖုိ့ မဖြစ်နိုင်ဘူး။ အဲဒီလို မုက္ခ ပါတ်တွေကို “မိုဟ်ကမ်” ဆိုပြီး အာရေဗျလို ခေါ်ဆိုထားပါတယ်။ ကိုရန်ကျမ်းစာပါ တခြားမုက္ခပါတ် အချို့ကတော့ အဓိပ္ပါယ် ဖွင့်တဲ့နေရာမှာ ကောက်ယူမှု လွဲမှားနုိုင်ချေရှိပါတယ်။ အဲလို မုက္ခပါတ်တွေကိုကျ “မုသရှားဘ်” လို့ခေါ်ပါတယ်။ “မုသရှားဘ်” မုက္ခပါတ်တွေကို အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ပြီး အဲဒီအဓိပ္ပါယ် ဒါမှမဟုတ် ကောက်ချက်ဟာ မှားယွင်းနေတယ်ဆိုရင်တော့ “မိုဟ်ကမ်” ဆိုတဲ့ မုက္ခပါတ်တွေက ပယ်ချပါတယ်။ ဒါကြောင့် “မိုဟ်ကမ်” ဆိုတဲ့ မုက္ခပါတ်တွေကို ကျမ်းတော်ရဲ့မိခင်ဆိုပြီး သုံးနှုန်း ထားခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။
ဒါကတော့ ရှရီယာစစ်မစစ် စိစစ်တဲ့ အလွယ်ဆုံးနဲ့ အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
ကိုရန်ကျမ်းစာမှ ပြောသော လွတ်လပ်စွာ ဆင်ခြင်တွေးခေါ်ခွင့်နှင့် လွတ်လပ်စွာကိုးကွယ်ယုံကြည်ခွင့်
လွတ်လပ်စွာ ဆင်ခြင်တွေးခေါ်နုိုင်ရမယ်၊ မိမိနှစ်သက်တာကို လွတ်လပ်စွာ ကိုးကွယ်နုိုင်ရမယ်။ ဒီအချက်နှစ်ခုက အစ္စလာမ် သာသနာရဲ့ အခြေခံ နည်းနာတွေ ဖြစ်ပါတယ်။ ကုိုရန်ကျမ်းစာမှာ ဖော်ပြထားတာက –
“သာသနာရေးတွင် မည်သို့သော အတင်းအကျပ် အဓမ္မပြုမှုမျှမရှိ။ ဧကန်ပင် လမ်းမှန်သည် လမ်းမှားနှင့် ရှင်းလင်းစွာ ကွဲပြား ထင်ရှားခဲ့ပေပြီ။” (ကိုရန်ကျမ်းစာ အခန်း ၂ ၊ မုက္ခပါတ်အမှတ်စဉ် ၂၅၇)
ဒီမုက္ခပါတ်တော်အရ မွတ်စလင်တိုင်းဟာ တခြားလူတွေကို အစ္စလာမ်ဘာသာအပေါ် သက်ဝင်ယုံကြည်လာစေဖို့ ခြိမ်း ခြောက် အကြပ်ကိုင်တာမျိုး လုပ်လို့မရဘူးဆိုတာ သိရှိနိုင်ပါတယ်။
လူတစ်ဦးက မွတ်စလင်အဖြစ်ကနေ ဘာသာပြောင်းသွားခဲ့ရင် သူ့ကို သေဒဏ်ပေးရမယ်ဆိုတာက တနည်းအားဖြင့် သူမွတ် စလင်ပြန်ဖြစ်လာအောင် ခြိမ်းခြောက်အကြပ်ကိုင်တာ ဖြစ်တာကြောင့် အထက်မှာဖော်ပြထားတဲ့ မုက္ခပါတ်နဲ့ ဖြောင့်ဖြောင့်ကြီး ဆန့်ကျင်နေမှာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
အစ္စလာမ်ကို မယုံကြည်တဲ့သူရော၊ အစ္စလာမ်ကနေ ထွက်ပြီး ဘာသာပြောင်းသွားသူတွေမှာပါ ကြိုက်နှစ်သက်ရာကို လွတ် လပ်စွာ ရွေးချယ်ကျင့်သုံးခွင့်ရှိသလို သူတို့ကို ယုံကြည်သူတွေဖြစ်လာစေဖို့ အင်အားသုံးတာမျိုး၊ အပြစ်ဒဏ်တွေချမှတ် တာမျိုး (အထူးသဖြင့် သေဒဏ်) ကို လုံးဝတားမြစ်ထားပါတယ်။
အထက်မှာ ဖော်ပြထားတဲ့ ကုိုရန်ကျမ်းစာ ၂း၂၅၇ ကတော့ အင်အားသုံးပြီး ဘာသာကူးပြောင်းအောင် ဆောင်ရွက်တာမျိုး မလုပ်ဖို့ တားမြစ်ထားတဲ့အပြင်၊ အတင်းအဓမ္မပြုခြင်းကြောင့် အမှန်တရားကို တင်းပြည့်ကျပ်ပြည့် လက်ခံလာဖို့ မရှိဘဲ အမှန် တရားဟာ ထင်ရှားကွဲပြားစွာရှိနေတာကြောင့် လက်ခံဖို့ရာ လွယ်ကူပြီးဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုပါ “ဧကန်ပင် လမ်းမှန် သည် လမ်းမှားနှင့် ရှင်းလင်းစွာ ကွဲပြားထင်ရှားခဲ့ပေပြီ” ဆိုပြီး ဖော်ပြထားတာ တွေ့ရပါတယ်။
ကိုရန်ကျမ်းစာရဲ့ အခြားနေရာတွေမှာလည်း လွတ်လပ်စွာကိုးကွယ်ယုံကြည်ခွင့်နဲ့စပ်လျဉ်းပြီး ဖော်ပြထားတာ တွေ့ရပြန်ပါ တယ်။
ဥပမာ ကိုရန်ကျမ်းစာ အခန်းနံပါတ် ၁၈ ၊ မုက္ခပါတ်အမှတ်စဉ် ၃၀ မှာ – “ထို့ပြင်ပြောကြားပါလေ။ အမှန်တရားဟူသည်အသင် တို့အား ဖန်ဆင်းမွေးမြူတော်မူသော အရှင်မြတ်၏ထံတော်မှသာ ဖြစ်ပေသည်။ သို့ဖြစ်ရာ အကြင်သူသည် အလိုရှိလျှင် သက်ဝင်ယုံကြည်ပါလေ။ ထို့ပြင် အကြင်သူသည် အလိုရှိလျှင် မယုံကြည်ငြင်းပယ်နိုင်၏” ဆိုပြီး ဖော်ပြထားပါတယ်။
အစ္စလာမ်သာသနာကို စွန့်လွှတ်သွားသူအတွက် ရှရီယာမှ ပြဌာန်းသည့် အပြစ်ဒဏ်
ရှရီယာဥပဒေ အစစ်အမှန်ဖြစ်တဲ့ ကိုရန်ကျမ်းစာကတော့ အကယ်၍ လူတစ်ဦးဟာ အစ္စလာမ်ဘာသာဝင်အဖြစ်ကနေ အခြားဘာသာကို ကူးပြောင်းခဲ့တယ်ဆိုရင် အခြားလူတွေကသော်လည်းကောင်း၊ အစိုးရကသော်လည်းကောင်း သူ့ကို အပြစ်ဒဏ်တစုံတရာပေးဖို့ သတ်မှတ်ပြဌာန်း ပေးထားတာမျိုး လုံးဝမရှိဘူးဆိုတာကို ရှင်းလင်းစွာ ဖော်ပြပြီး ဖြစ်ပါတယ်။
ဘာသာပြောင်းသွားသူ ဒါမှမဟုတ် ဘာသာမဲ့ဖြစ်သွားတဲ့ သူကို အပြစ်ပေးဖို့ရာ အခြားလူတွေမှာ အခွင့်အာဏာမရှိပါ။ အစ္စလာမ်သာသနာဝင်များရဲ့ အထွတ်မြတ်ဆုံး၊ အကြီးကျယ်ဆုံး မဟာတမန်တော်ဖြစ်တဲ့ မုဟမ္မဒ်မှာတောင် အခွင့်အာ ဏာမရှိပါ။ မုဟမ္မဒ်ဟာ သတင်းစကားပေးပို့သူသာဖြစ်ပြီး လူသားတွေအနေနဲ့ သူပေးပို့တဲ့ သတင်းစကားကို ယုံကြည်လို တယ်ဆုိုရင် ယုံကြည်နိုင်သလို၊ ငြင်းပယ်လိုတယ်ဆိုရင်လည်း ငြင်းပယ်နိုင်တဲ့အကြောင်း ကိုရန်ကျမ်း ၁၈း၃၀ အရလည်း သိရှိပြီးပါပြီ။ အခုတခါ တမန်တော် မုဟမ္မဒ်ကိုယ်တိုင်သည်ပင် သူ့သတင်းစကားကို မယုံကြည်တဲ့သူတွေအပေါ် စောင့်ကြပ် စီမံဖို့ တာဝန်ပေးအပ်ခံထားရသူမဟုတ်တဲ့အကြောင်းကို ကိုရန်ကျမ်းစာအရပဲ အောက်ပါအတုိုင်း သိရှိမှတ်သားနုိုင်ပါတယ်။
“အသင်ပြောကြားပါလေ(ဤစာသားမှာ အလ္လာဟ်ဘုရားရှင်က တမန်တော် မုဟမ္မဒ်အား ကြေညာမောင်းခတ်ရန် အမိန့်ပေး ခြင်းဖြစ်သည်)၊ အို-လူသားအပေါင်းတို့၊ စင်စစ်သော်ကား အသင်တို့ထံ အသင်တို့အားဖန်ဆင်းမွေးမြူ တော်မူသောအရှင် ၏ထံတော်မှ အမှန်တရားသည် ရောက်ရှိလာခဲ့ချေပြီ။ သို့ဖြစ်ရာ အကြင်သူသည် တရားလမ်းမှန်ကိုရရှိ ခဲ့လျှင် ယင်းသူသည် မိမိစိတ်ဝိညာဉ်အတွက်သာလျှင် တရား လမ်းမှန်ကိုရရှိခြင်းဖြစ်ပေသည်။ ထို့ပြင် အကြင်သူသည် လမ်း မှားပါက ထိုသူသည် မိမိစိတ်ဝိညာဉ်နှင့် ဆန့်ကျင်လျက်သာ လမ်းမှားခြင်းဖြစ်၏။ စင်စစ် ကျွန်ုပ်သည် အသင်တို့အပေါ် စောင့်ကြပ်သူမဟုတ်ချေ။” (ကိုရန်ကျမ်းစာ အခန်းနံပါတ် ၁၀ ၊ မုက္ခပါတ်အမှတ်စဉ် ၁၀၉ )
“အသင်သည် (မုဟမ္မဒ်ကို ရည်ညွှန်း) အဖန်တလဲလဲ သွန်သင်ဆုံးမသူတစ်ဦးသာဖြစ်ပေသည်။
အသင်သည် ၎င်းတို့အပေါ် စောင့်ကြပ်သူ မဟုတ်ချေ။” (ကိုရန်ကျမ်းစာ အခန်းနံပါတ် ၈၈ ၊ မုက္ခပါတ်အမှတ်စဉ် ၂၂ မှ ၂၃)
မုဟမ္မဒ်ကိုယ်တိုင်သည်ပင် အစ္စလာမ်ကို မယုံကြည်တဲ့သူတွေအတွက် စောင့်ကြပ်ထိန်းကွပ်ဖို့ အခွင့်အာဏာရှင်မဟုတ်မှ တော့ အစ္စလာမ်သာသနာမှာ တခြားဘယ်သူကများ မုဟမ္မဒ်ထက်ပိုပြီး သြဇာအာဏာရှိတယ်လို့ ကြွေးကြော်နိုင်ပါတော့မလဲ။
ဘာသာပြောင်းသူအတွက် စောင့်ကြပ်စီမံဖို့ လူတွေမှာ အခွင့်အာဏာမရှိဘဲ ဘုရားရှင်ကသာ စောင့်ကြပ်စီမံမှာ ဖြစ်တဲ့အ ကြောင်းကို ကိုရန်ကျမ်းက အခုလို ဖော်ပြထားပါသေးတယ်။
“အကြင်သူသည် (အီမာန်) ယုံကြည်ခြင်းကိုပင် ငြင်းပယ်ပါလျှင် ထိုသူ၏ ကျင့်ကြံအားထုတ်မှုသည် ဧကန်စင်စစ် အချည်းနှီး ဖြစ်ချေသည်။ ထိုသူသည် နောင်တမလွန်တွင် ဆုံးရှုံးသူများအနက်မှ ဖြစ်လိမ့်မည်တည်း။” (ကိုရန်ကျမ်းစာ အခန်းနံပါတ် ၅ ၊ မုက္ခပါတ်အမှတ်စဉ် ၆)
ဒါကြောင့် အစ္စလာမ်သာသနာကနေ ဘာသာပြောင်းသွားသူတစ်ယောက်အတွက် လောကီအပြစ်ဒဏ် တစုံတရာမှ မရှိသ လို၊ သူ့အနေနဲ့လည်း အစ္စလာမ်သာသနာ၊ အစ္စလာမ့်ကျမ်းစာတွေအပြင် အစ္စလာမ့်ဘုရားရှင် အလ္လာဟ်ကိုပါ မယုံကြည်တော့ တဲ့အတွက် အလ္လာဟ်အရှင်ပြဌာန်းတော်မူထားတဲ့ နောင်တမလွန်ဘ၀ကိုလည်း စနိုးစနောင့်ဖြစ်နေစရာ မလိုတော့ပါဘူး။
အတိုချုံးရရင် ဘာသာကူးပြောင်းသူအတွက် တမန်တော်မုဟမ္မဒ်အပါအ၀င် လောကီလူသားတစ်ယောက်မှာမှ အပြစ်ပေးဖို့ ရာ အခွင့်မရှိဘဲ၊ သူရဲ့အရေးကိစ္စကို အလ္လာဟ်ကသာ စီမံတော်မူမှာ ဖြစ်တဲ့အကြောင်း၊ သူ့အနေနဲ့လည်း အလ္လာဟ်ဘုရားကုို မယုံကြည်တော့တဲ့အတွက် စိတ်ပူပန်နေစရာ မလိုတော့တဲ့အပြင် မိမိနှစ်သက်ရာကို လွတ်လပ်စွာ ကိုးကွယ်ယုံကြည်နိုင်ပြီ ဖြစ်ပါတော့တယ်။
အစ္စလာမ်မစ်နုိုင်ငံဟု မိမိတို့ကိုယ်ကို ကြေညာထားသည့် နုိုင်ငံအချို့မှာ ဘာသာကူးပြောင်းသူများကို ဘာကြောင့် သေဒဏ် ပေး ရပါသလဲ
တမန်တော်မုဟမ္မဒ်အလွန် နှစ်ပေါင်း ၃၀၀ ကျော်မှ စတင်ပြုစုဆောင်းခဲ့တဲ့ ဟဒီးဆ်ကျမ်းအချို့မှာ ဘာသာပြောင်းသူနဲ့ ပတ် သတ်ပြီး ကိုရန်ကျမ်းနဲ့ဆန့်ကျင်တဲ့ အပြစ်ဒဏ်တွေကို ဖော်ပြထားတာမျိုး ရှိပါတယ်။
ဟဒီးဆ်ကျမ်းတွေကို စုဆောင်းတဲ့နေရာမှာ ဆင့်ပြန်ပြောပြတဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်များအပေါ်အခြေခံပြီး သူတို့ပြောပြတဲ့ အဖြစ်အပျက် အလိုက် တန်းစီမှတ်တမ်းတင်ပါတယ်။ ဆင့်ပြန်သူကွင်းဆက်အလိုက် တိကျသေချာစွာ စိစစ်နိုင်တဲ့ ဟဒီးဆ်မှတ်တမ်း တွေရှိသလို ကွင်းဆက်ပြတ်ကျန်ရစ်တဲ့ မှတ်တမ်းတွေလည်း ရှိပါတယ်။ ဒါ့ပြင် ဆင့်ပြန်သူရဲ့ ကိုယ်ကျင့်စာရိတ္တကိုလည်း စိစစ်မှတ်ကျောက်တင်ပြီး အချို့ဟဒီးဆ်တွေမှာ စာရိတ္တမှတ်တမ်းမကောင်းတဲ့ ဆင့်ပြန်သူပါလာခဲ့သည်ရှိသော် အဲဒီဟဒီးဆ် မျိုးကို လက်မခံထုိုက်တဲ့အကြောင်း အစ္စလာမ့်ပညာရှင်တွေက ဆုံးဖြတ်ကြပါတယ်။
ဥပမာ – ဘာသာပြောင်းသူတွေကို သတ်ပြစ်ရမယ်ဆိုတဲ့ စကားကို ဆင့်ပြန်ခဲ့တဲ့ “အိက္ကရာမာ” ဆိုသူဟာ ကိုယ်ကျင့်မှတ် တမ်းတွေအရ လိမ်လည်လှည့်ဖျားမှုတွေ ကျူးလွန်ခဲ့ဖူးသူဖြစ်တာကြောင့်၊ အစ္စလာမ်သာသနာမှာ ယုံကြည်လေးစားရတဲ့ သာသနာ့ပညာရှင် “အေမာမ်မာလိက်” သူ့ကို လူလိမ်အဖြစ် ဓမ္မသတ်ဆုံးဖြတ်ခဲ့ဖူးပါတယ်။
ရှရီယာဥပဒေမှာ ဟဒီးဆ်ရဲ့ကဏ္ဍက တတိယနေရာသာ လိုက်ပါတယ်။ ဆင့်ပြန်သူကွင်းဆက်ပြတ်ကျန်ရစ်တာမျိုး ၊ ဆင့်ပြန် သူရဲ့ ကိုယ်ကျင့်တရားက ပြစ်တင်စောကြောစရာဖြစ်နေတာမျိုး ဆိုရင်တော့ အဲဒီဟဒီးဆ်ကို မခိုင်အားနည်းတဲ့ ဟဒီးဆ်အဖြစ် သတ်မှတ်ရမှာဖြစ်သလို စံထားနောက်လိုက်ပြုစရာလည်း မလိုတော့ပါဘူး။
ဘာသာပြောင်းသူအတွက် သေဒဏ်ကို ဖော်ပြထားတဲ့ ဟဒီးဆ်တွေ အားလုံးဟာ မခိုင်အားနည်းတဲ့ ဟဒီးဆ်တွေဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီဟဒီးဆ်တွေကို စိစစ်ကြည့်ရင်လည်း တမန်တော်မုဟမ္မဒ်ရဲ့ ကိုယ်ထိလက်ရောက် အပြုအမူကို ရေးသားမှတ်တမ်းတင်ထားတာမျိုးမဟုတ်ဘဲ “ကျွန်တော်တော့ ဒီလိုကြားသိခဲ့တာပဲ” ဆိုတဲ့ အသွင်သာ ဆောင်နေတာကို တွေ့ရပြန်ပါတယ်။ ဘာ ကြောင့် အဲဒီဟဒီးဆ်တွေမှာ ဘာသာပြောင်းသူကို သတ်ပြစ်ရမယ်လို့ ဆိုထားတာလဲ? ဆန်းစစ်ကြည့်ကြရအောင်။
တမန်တော်မုဟမ္မဒ်လက်ထက် အာရေဗျကျွန်းဆွယ်မှာ အစ္စလာမ်ဘာသာ တမျိုးထဲမဟုတ်ဘဲ ရဟူဒီနဲ့ ခရစ်ယာန်ဘာ သာဝင်တွေလည်း လူမျိုးနွယ်အုပ်စုကြီးတွေအလိုက် ရှိခဲ့ပါတယ်။ ဒါကြောင့် ရဟူဒီ ၊ ခရစ်ယာန်နဲ့ အစ္စလာမ်ဘာသာဝင်တွေရဲ့ ဓလေ့ထုံးတမ်းတွေဟာ ရောထွေးနေတာကို တွေ့ရပါတယ်။ ဒါ့ပြင် အစ္စလာမ့်အင်ပါယာအောက်မှာ ရှိနေတဲ့ ဘာသာကွဲတွေကို ရာဇ၀တ်မှု ကျူးလွန်လို့ စီရင်ဆုံးဖြတ်တဲ့အခါ သူတို့စိတ်ကြိုက် ဥပဒေအတိုင်း စီရင်ဆုံးဖြတ်ပါတယ်။ ဥပမာ – ရဟူဒီတစ်ဦးကို တရားစီရင်တဲ့အခါ သူက တိုရာကျမ်းကို ရွေးမလား၊ ဓမ္မသစ်ကျမ်းကိုရွေးမလား၊ ကိုရန်ကျမ်းကိုပဲရွေးမလား၊ ဒါမှမဟုတ် တရားသူကြီးအဖွဲ့ရဲ့ သဘောထားအတိုင်း အစီရင်ခံမလား စသဖြင့် ရွေးချယ်ခွင့်ပေးထားပါတယ်။ ပုံမှန်အားဖြင့်တော့ ရဟူ ဒီက တိုရာကိုပဲ ရွေးမှာဖြစ်ပါတယ်။
တိုရာကျမ်းကို လေ့လာတဲ့အခါ ဘာသာပြောင်းသူအတွက် သေဒဏ်ကို ဖော်ပြထားတာ တွေ့ရပါတယ်။
“သင်၏ညီအစ်ကိုရင်း၊ သင်၏သားသမီး၊ သင်၏ရင်ခွင်၌ နေသောမယား၊ ကိုယ်ကဲ့သို့မှတ်တတ်သော အဆွေခင်ပွန်း တစုံတယောက်က၊ သွားကြစို့၊ သင်လည်းမသိ၊ ဘိုးဘေးတို့လည်း မသိသော အခြားတပါးသော ဘုရား၊ သင့်ပတ်လည် အနီးအဝေး၌ နေသောသူ၊ မြေကြီးစွန်းတဘက်မှသည် တဘက်တိုင်အောင်၊ ကိုးကွယ်သော ဘုရားကို ဝတ်ပြုကြစို့ဟု တိတ်ဆိတ်စွာသွေးဆောင်လျှင်၊ သင်သည်ဝန်မခံရ။ သူ၏စကားကို နားမထောင်ရ။ သူ့ကိုမြင်သော အခါမသနားရ။ နှမြော သဖြင့်ဖွက်၍ မထားရဘဲ၊ သူ့ကိုအမှန်သတ်ရမည်။” (တရားဟောရာကျမ်း ၊ အခန်းကြီး ၁၃ ၊ အခန်းငယ် ၆ မှ ၈ အထိ)
ဒါကြောင့် ဓလေ့ထုံးတမ်းတွေ ရောပြွမ်းနေတဲ့ အာရေဗျအဖြစ်အပျက်ကို နှစ်ပေါင်းရာကျော်မှ ဆင့်ပြန်သူတွေရဲ့ တဆင့်စ ကားများနဲ့ မှတ်တမ်းတင်တဲ့အခါ တိုရာကျမ်းရဲ့ ဆုံးဖြတ်ချက်ဟာ ရှရီယာခေါင်းစဉ်အောက် ရောက်ခဲ့ရပါတော့တယ်။
သို့သော် ကိုရန်ကျမ်းစာကသာ ရှရီယာအစစ်အမှန် ဟုတ်မဟုတ် စိစစ်ပိုင်းခြားတာကြောင့် ကိုရန်ကျမ်းက ဘာသာပြောင်း သူအတွက် အပြစ်ဒဏ်ပေးဖို့ သတ်မှတ်ပြဌာန်းထားတာမျိုးမရှိတဲ့အပြင် အဲဒါရဲ့ ဆန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်တဲ့ လွတ်လပ်စွာ ကိုး ကွယ်ယုံကြည်ခွင့် (ကိုရန် ၂း၂၅၇) ကို အသေအချာပြဌာန်းပေးထားတာကို တွေ့ရှိရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
တဖန်ကိုရန်ကျမ်းစာ အခန်းအမှတ် ၄ ၊ မုက္ခပါတ်အမှတ်စဉ် ၁၃၈ မှာ အောက်ပါအတုိုင်း ဖတ်ရှုနိုင်ပါတယ်။
“ဧကန်စင်စစ်အကြင်သူတို့သည် (အီမာန်) သက်ဝင်ယုံကြည်ခြင်းရှိပြီးမှ တစ်ဖန်ငြင်းပယ်မှုကိုပြု၏။ ထို့နောက်တဖန် သက် ဝင်ယုံကြည်ပြီး တစ်ဖန်ပြန်၍ ငြင်းပယ်ခြင်းကိုပြုပြီး နောက် မယုံကြည်ငြင်းပယ်မှု၌ တိုးပွားလျက်သာရှိခဲ့ကြ၏။”
အကယ်၍ ဆော်ဒီနဲ့ အီရန်စတဲ့ နိုင်ငံများရဲ့ ဖန်တီးတီထွင်ထားတဲ့ ရှရီယာအရ ဘာသာပြောင်းသူကို သေဒဏ်ပေးရမယ်ဆိုရင် အဲဒီလူက သေပြီးဖြစ်တာကြောင့် အစ္စလာမ်သာသနာထဲတဖန်ပြန်ဝင်လာစရာ အကြောင်းမရှိတော့ပါ။ ဒါဆိုဘာကြောင့်များကိုရန်ကျမ်းစာက သက်ဝင်ယုံကြည်ခြင်းရှိပြီးမှ ငြင်းပယ်ကြတယ်၊ တခါထပ်ပြီး ပြန်လည်သက်ဝင်ယုံကြည်ကြတယ်၊ ပြီး တော့ ပြန်ထွက်သွားကြတယ်လို့ ဖော်ပြထားပါသလဲဆိုတာ ဆော်ဒီနဲ့ အီရန်နိုင်ငံတွေက သာသနာ့ပညာရှင်တွေကို မေးခွန်း ထုတ်ရပါတော့မယ်။
အချုပ်ဆိုရရင် မွတ်စလင်တိုင်းဟာ အစ္စလာမ်သာသနာကိုစွန့်ပြီး အခြားဘာသာကို ကူးပြောင်းခွင့်ရှိသလို၊ ဘာသာမဲ့အဖြစ် လည်း ကြေညာခွင့်ရှိပါတယ်။ အဲဒီလူကို ဘယ်သူတဦးတယောက်ကမှ ‘သာသနာပ’ ဖြစ်သွားသူရယ်လို့ ကြေညာပိုင်ခွင့် မရှိပါ။ အစိုးရကသော်လည်ကောင်း၊ ရှရီယာခုံရုံးကသော်လည်းကောင်း၊ သာသနာ့ရှေ့ဆောင် ဗလီဆရာတွေက သော် လည်းကောင်း၊ ယုံစွအဆုံး တမန်တော်မုဟမ္မဒ်ကိုယ်တိုင်တောင် ကြေညာဆုံးဖြတ်ပိုင်ခွင့်မရှိပါ။ ဘာသာကူးပြောင်းခြင်းဟာ သူပုန်ထမှု ဒါမှမဟုတ် နုိုင်ငံတော် သစ္စာဖောက်မှုမျိုးမဟုတ်တာကြောင့် အပြစ်ဒဏ်တစုံတရာပေးဖို့ကိုလည်း အစ္စလာမ် သာသနာက သတ်မှတ်ပြဌာန်းထားခြင်း လုံးဝမရှိပါကြောင်း။
ကျွန်တော် စာရေးသူမှာ အဟ်မဒီယာမွတ်စလင်အဖွဲ့ဝင် တစ်ဦးဖြစ်သည့်အလျောက် အဟ်မဒီမွတ်စလင်များ၏ စံနှုန်းအတိုင်း ကုရ်အာန် (ကုိုရန်) ကျမ်းစာ မုက္ခပါတ် နံပါတ်စဉ်များကို ဖော်ပြထားပါသည်။ သို့ပါ၍ အခြားကုရ်အာန်များနှင့် တိုက်ကြည့်ပါက မုက္ခပါတ်အမှတ်စဉ် တစ်ခုပိုနေမည်ဖြစ်ပါသည်။ အဟ်မဒီမွတ်စလင်များက ကုရ်အာန်ကျမ်းစာ အခန်းတုိုင်းမှ “ဗိစ္စလ္လာဟ်” မုက္ခပါတ်ကိုပါ နံပါတ်စဉ် ထည့်သွင်းရေတွက်သည့်အတွက် ယင်းကဲ့သို့ တစ်ခုပိုနေရခြင်းဖြစ်ပါသည်။
ဤဆောင်းပါးနှင့်ပတ်သတ်၍ စာရေးသူအား ဝေဖန်မှတ်ချက်ပေးလိုပါက tmhtwe@gmail.com သို့ ဆက်သွယ်နုိုင်ပါသည်။
One Response to တင်မောင်ထွေး – ဘာသာပြောင်းသူတွေကို သေဒဏ်ပေးဖို့ အစ္စလာမ်က သတ်မှတ်ပြဌာန်းထားပါသလား
ထန်းရှိန်းလိန်း on November 30, 2015 at 8:12 pm